Ukuveliswa kunye neFektri yaseChina TQSF IChinatown
TQSF Uthotho lweGrivity Destoner
I-TQSF Series Gravity Destoner yokucoca iinkozo, Ukususa ilitye, Ukuhlela ingqolowa, Ukususa ukungcola kokukhanya njalo njalo.
Umahluli wamatye unentsebenzo enkulu yokwahlula. Ingasusa amatye akhanyayo kubungakanani beenkozo kumqukuqelo wokutya okuziinkozo, yenza igalelo elikhulu ekufumaneni iimveliso ezigqibeleleyo ukuya kuthi ga kwimigangatho efanelekileyo yokutya.
Izinto eziphathekayo ziwela kwipleyiti yesikhokelo ukusuka kwindawo yokungena kunye nokugubungela ngokulinganayo kububanzi bonke be-sieve ephezulu ngenxa yesenzo sokudlidliza kumatshini. Isenzo esidibeneyo sokungcangcazela kunye nokuhamba komoya kwenza ukuba izinto ezikwisefa ephezulu zihlelwe ngokuzenzekelayo ngokwendlela ethile yomxhuzulane kunye nobukhulu begranular. Izinto ezikhanyayo ziba ngaphezulu kwe-sieve ephezulu kwaye ikhutshwe ngaphandle komatshini kumsila womatshini. Izinto ezilula ngakumbi ezinjengomququ nothuli zisuswe kwindawo yokuphuphuma. Izinto ezinzima kunye namatye kunye nesanti ziwela kwisisefo esezantsi ngesihluzi esingaphezulu. Njengoko isenzo sokungcangcazela komatshini, ukuhamba komoya kunye nokhuphiswano, izinto ezinzima zihamba ziye emsileni womatshini kwaye zikhutshwe ngomsila ngelixa isanti kunye namatye esiya entlokweni yomatshini kwaye ikhutshwe kwilitye. Ngokusebenzisa iifestile zokujonga, umsebenzisi unokujonga ngokuthe ngqo umphumo wokuhlelwa kunye nokuxulutywa kwamatye.
-Ibhokisi yesisefo esihlala ilayishwe ngee-sieve ezingqimba ezimbini ixhaswe yimithombo yerabha engenanto kwaye ibangelwa kukungcangcazela yenye okanye ezimbini zokungcangcazela ngokusekwe kumatshini.
-Ukuze kufikelelwe kwinqanaba elifanelekileyo lokwahlula kunye nokuhlela, ukutyekela kweesefu, ivolumu yomoya kunye nokwahlula okokugqibela kunokuhlengahlengiswa ngokufanelekileyo.
-Umatshini wokujolisa kulungele ukususa amatye kumjelo oqhubekayo wokutya okuziinkozo
- Kwisiseko somahluko kumxhuzulane othile, ukususwa kobumdaka obuninzi obufana namatye, udongwe kunye namaqhekeza esinyithi kunye neglasi.
- Njengomnye woomatshini abacoca ukutya okuziinkozo, isetyenziswa ngokubanzi kwicandelo lokucoca izinto ezingafunekiyo kwimizi yokugaya umgubo, iirayisi, izinto zokugaya ukutya kunye nembewu yokulungisa imbewu.
1) Ukuthembeka kunye nokuhlelwa okuhle kakhulu kunye nokuxulutywa ngamatye.
2) Uxinzelelo olubi, akukho luthuli luphumayo.
3) Umthamo omkhulu.
4) Ukusebenza ngokulula kunye nokugcinwa.
Ipleyiti yokuluka ephezulu:
Izikrini ezintathu zecandelo elinemingxunya eyahlukeneyo yobukhulu zisetyenziselwa ukuphucula ulwahlulo oluzenzekelayo lwezixhobo.
Ipleyiti esefu esezantsi:
Isebenza ngaphezulu kokususa ilitye ngokusebenza okuphezulu.
Ukugcina i-sieve kuthintelo ngokucoca isisefe ngokufanelekileyo.
Ubungakanani kunye nesalathiso se-angle angle
I-amplitude kunye ne-screen angle zinokuhlengahlengiswa ngokwesalathiso.
Uhlengahlengiso emnyango Wind:
Umthamo womoya unokuhlengahlengiswa ngokweempawu ezibonakalayo, ukuze ufezekise iziphumo ezilungileyo.
Egqithileyo Ukudityaniswa komgubo
Okulandelayo: Umxube womgubo